Nzira yekudzivirira sei kuonana neWhatsApp | IPhone nhau
WhatsApp yazova chimwe chezvishandiso zvinoshandiswa zvakanyanya nemamirioni evashandisi, kunyangwe kune dzimwe nyika zvinoita sekunge chave chinamato. Vazhinji ndivo vashandisi vasingachashandise izwi rekuti meseji, asi "wasap". Ichi chishandiso yasvika padanho rakaenzana naRimel naDanone, mabhureki ayo nekufamba kwenguva akave akagadzirwa zvigadzirwa.
Muchokwadi, vazhinji ndivo vashandisi vanongoshandisa WhatsApp, kwete chete kutaurirana chete nevavanosangana navo kuburikidza nemameseji, asi zvakare kuishandisa senzira chete yekufona, kunyangwe nenyaya yekuti mhando yekufona ichiri kufanira kugadzirisa. Asi sezvo mashandisiro ayo akawedzera, chikuva ichi chavewo chakasarudzika sarudzo yekushungurudza, kuparadzira hutsotsi ... izvo zvinotimanikidza nguva nenguva kuenda bvisa kuonana paWhatsApp.
Kune vamwe vashandisi, ziva kana vakaivharira paWhatsApp inogona kuve yekukwezva, kunyanya mushure mekuuya kweiye anozivikanwa cheki uye cheki yebhuruu cheki yaive shanduko, kubvira panguva iyoyo zvichienda mberi, zvaive zvichikwanisika kuziva kuti ndiani akagamuchira meseji uye kana yaive yaverengwa kana kwete. Uku kusava nehutano kwakakonzera dambudziko rinopfuura rimwe, kungangoita nyika dzese, pakati peshamwari dzedu, kunyangwe kunyanya pakati pevadiki, sezvo vashandisi vazhinji vari pavanoona cheki yebhuruu chechipiri, vanofunga kuti hatidi kuipindura, sekunge vedu Hupenyu hunoenderana neWhatsApp uye hapana chimwe chatingaite.
1 Ndakavharirwa paWhatsApp, ndingaitei?
2 Chii chiri kushandiswa kwekuvharira wekubata paWhatsApp?
3 Bvisa wekutaurirana akanyoreswa muWhatsApp
4 Bvisa wekutaurirana asina kunyoreswa mubhuku redu renhare paWhatsApp
5 Zivhura yakavharidzirwa nhare paWhatsApp
Ndakavharirwa paWhatsApp, ndingaitei?
Munhu wega wega akasiyana, saka munhu wega wega anogona kunge aine zvakasiyana zvavanofarira kana zvavanofarira pane vamwe kana vachifunga zvekuvhara munhu wekuonana naye. Kana iwe wakavharidzirwa nehukama Izvo zvawaigara uchiwirirana nazvo, chinhu chakanakisa chaungaite kurega kushandisa WhatsApp kwechinguva uye kufona nefoni, kwete WhatsApp, kugadzirisa kusanzwisisika kunogona kuitika kwakakonzera kuti nhamba yako ivharwe.
Kana wekubatana akavharirwa kuburikidza neWhatsApp, kutaurirana kwese kuburikidza nekushandisa nemunhu anga avharira iko kuonana ichakanganiswa, saka sezvo isingagamuchire mameseji edu, haigamuchire mafoni edu kunyangwe ikatitaridza ringtone. Muzviitiko izvi, sekutaura kwandakaita mundima yapfuura, kana tichida kudzoreredza kutaurirana, zvakanakisa zvatingaite kufona nefoni kuti tizvigadzirise.
Kana iko kubatana kwatakativharira kuburikidza neWhatsApp, iyo yakativharirawo isu zvakananga mune inouraya, chinhu ichi chakaomarara nekuti hachizogashira chero chedu kufona kana mameseji eSMS kunze kwekunge tashandisa Facebook Messenger, chero bedzi isina kuvharika futi.
Chii chiri kushandiswa kwekuvharira wekubata paWhatsApp?
Basa chete rinofanira kuvhara kusangana muWhatsApp, iri sezwi rinoratidza, dzivisa kugamuchira chero kutaurirana kubva kumunhu uyu, kungave kuburikidza neshoko kana muchimiro chekufona. Ramba uchifunga kuti kana iwe uri muboka revanhu pane munhu uyu, mameseji iwe aunonyora anoonekwa mune yako application, uye iwe unogona kufonerwa kuburikidza neboka riri pasi peziso rakatarisa rezvinhu zvese zveboka.
Bvisa wekutaurirana akanyoreswa muWhatsApp
Maitiro ekuvharira kusangana paWhatsApp haina kuomarara uye tinogona kuzviita nenzira yakapusa uye inokurumidza. Dzosera maitiro aya zvakareruka zvakaenzana, saka kana tikati kuvhura WhatsApp kuonana, maitiro haatitore isu anopfuura masekondi mashoma.
Chekutanga pane zvese tinotendeukira kune iyo Chats tab uye slide kuruboshwe hurukuro yemunhu watinoda kuvharira. Wobva wadzvanya pa Asi.
Kana tisina kumboita hurukuro nemunhu iyeye, asi isu tine nhamba yavo yefoni pane yedu kifaa, isu tinongofanirwa kuenda kubhawa rekutsvaga uye tinyore zita ravo. Kana zvangoonekwa, tinya pa «i» inoratidzwa kurudyi kwezita rako kuti uwane iwo ruzivo rweyu unowanikwa.
Mune iyo yekudonha-pasi menyu inoonekwa kubva pasi pechidzitiro chatinosarudza Info info.
Muchikamu chino iwe unowana rese ruzivo rwekushandisa rwevashandisi. Isu tinoenda pasi uye tinya pa Vimba kuonana.
WhatsApp inotipa sarudzo mbiri: Vimba zvakananga kuti usatambirezve kutaurirana kubva kune uyu wekubatana kana Mhan'arira se spam uye block, kuzivisa WhatsApp kuti kusangana uku kuri kutumira mameseji spam, kuitira kuti kana iwe ukaunganidza zvimwe zvichemo, iwe pakupedzisira haugone kushandisa WhatsApp nenhamba yakafanana yefoni.
Sezvisinganzwisisike sezvazvinoratidzika, muhwindo rehurukuro, haizoratidze pedyo nekutaura kubva kumunhu watakavharira chero icon kana meseji inotitaurira kuti uyu wekubata wavharidzirwa.
Bvisa wekutaurirana asina kunyoreswa mubhuku redu renhare paWhatsApp
Tinogona zvakare kuzviona tiri muchinzvimbo chekumanikidzwa kuvhara nhamba yefoni yemumwe munhu uyo Izvo hazvina kunyoreswa mune yedu yekubata runyorwaZvichida nekuti arikutitumira spam, nekuti tinoda kunzwa kubva kuvanhu ivavo, kana nekuti anoramba achititumira mameseji kuyedza kutanga hurukuro yatisingadi kuita.
Muzviitiko izvi, patinongogamuchira yekutanga meseji kubva kumunhu uyu, WhatsApp inoona kuti haisi mune yedu yekubata runyorwa, saka padhuze neyokutanga meseji kana mameseji ayo ayo anotitumira isu, chero bedzi isu tisingapindure, yambiro ichaonekwa pachikamu chekushandisa, matinoziviswa kuti mutumwa haazi mune yedu yemazita mazita uye achatipa zvitatu zvatingasarudze kubva: Block, Report spam kana Wedzera kuna Contacts.
Tichabaya Vimba kana zvisina kudaro isu tinoda kugamuchira mamwe mameseji kana kufona kubva kumunhu uyu, mu
Spam Kana tichida iyo nhamba, inozotariswa neWhatsApp ye spam.
Wedzera kuContact, kana tichida kuchengeta nhamba yefoni mudhairekitori redu.
Zivhura yakavharidzirwa nhare paWhatsApp
Maitiro ekuvhurira wekubatana muWhatsApp akafanana nezvatinoita kudimbura munhu wekuonana naye, asi pachinzvimbo chekudzvanya paBlock sarudzo mukati memashoko ekutaurirana, tinofanirwa kubaya paKuvhura, iyo yega sarudzo inowanika pakatariswa sarudzo yeBlock uye Mhan'ara spam. Panguva iyoyo, isu hatigamuchire meseji dzese dzavangadai vakatitumira kubvira kuvharirwa kwatanga, asi kubva panguva iyoyo isu tichagamuchira yega uye yega yega meseji uye mafoni anoitwa neanopindirana nesu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Vimba unosangana paWhatsApp
Ivo vanogona kuita dzidziso yemafonero kubva pafoni, zvakandiomera kwazvo.